रोचक गहुँबाट बन्ने आटा राम्रो, मैदा किन हानीकारक ? यी हुन् भित्री कारण
Nepal Online Patrika| Kathmandu: एउटा ठट्यौली छ, ‘रेष्टुरेन्टको मेनु जति हरेेपनि आखिरमा हामीले माग्ने खानेकुरा भनेको मम र चाउमिन हो ।’
हामीले दैनिक जसो मिठो मानेर खाने यी मैदाजन्य खाद्यपदार्थ शारीरिक स्वास्थ्यका लागि भने अत्यान्तै हानिकारक हुन् । स्वास्थ्य विज्ञानले यसै भन्छ । त्यही कारण स्वस्थ्य जीवन यापनका लागि मैदाजन्य खानेकुरा बर्जित गरिएको छ । बजारमा पाइनेजति सबै मिठा खानेकुरा मैदाबाट बनेका छन् । भोक लाग्दा छिटो-छरितो उपलब्ध हुने कुरा पनि यिनै हुन् । त्यसो भए यी खानेकुरा खानै हुन्न ? मैदाजन्य खानेकुरा सेवन गर्दा के हानी हुन्छ ?
किन हानिकारक मैदा?
रसायनले मैदा सेतो: तपाईं/हामीले देखेका छौं, गहुँको सेतो भाग कस्तो हुन्छ ? पक्कैपनि मैदा जति निख्खर सेतो हुँदैन । मैदा चहकिलो सेतो रंगको हुन्छ, जुन गहुँ हुँदैन । त्यसैले मैदालाई सेतो बनाउनका लागि रसायन मिश्रण गरिन्छ, जो स्वास्थ्यका लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ । क्याल्शियम परअक्साइड, क्लोरिन, क्लोरिन डाइ अक्साइड अदि जस्ता रसायन प्रयोग गरेर मैदालाई सेतो बनाइन्छ । यी रसायनले हाम्रो शरीरमा एकदम हानी गर्छ ।
आन्द्रामा टाँसिएर रहन्छ: मैदा चिप्लो र मिहिन हुन्छ । साथै यसमा फाइबर पटक्कै हुँदैन । त्यही कारण मैदाजन्य परिकार खाएपछि त्यसलाई हाम्रो पाचन यन्त्रले पचाउन सक्दैन । जब हामी मैदाजन्य परिकार सेवन गर्छाै, त्यो आन्द्रामा टाँसिएर बस्छ । यसले आन्द्रालाई दुषित बनाउँछ । यही कारण पेटको गडबडी एवं अन्य रोग लाग्छ । मैदाले कब्जियतको समस्या पनि निम्त्याउँछ ।
कोलोस्टोर र मोटोपन बढाउँछ: मैदामा स्टार्चको मात्रा एकदम बढी हुन्छ । त्यसैले मैदाजन्य खानेकुरा सेवन गर्दा मोटोपन बढ्छ । अहिलेका पुस्तामा अक्सर मोटोपनको समस्या छ । किनभने उनीहरु दैनिक भोजनमा मैदाजन्य खानेकुरा सेवन गरिरहेका छन् । त्यती मात्र होइन, मैदाले कोलोस्टोर र रगतमा ट्राइग्लीसराइडको स्तर पनि बढाएको छ । साथै मैदामा अत्याधिक मात्रामा ग्लूटन पनि पाइन्छ ।
मधुमेहको खतरा: मैदा खानसाथ तुरुन्तै तपाईं/हाम्रो शरीरमा देखिने प्रतिक्रिया हो, सुगर लेभल । मैदा सेवन गर्नसाथ हाम्रो शरीरको शुगर लेभल बढ्छ । किनभने यसमा उच्च ग्लाइसेमिक इन्डेक्स हुन्छ । त्यही कारण मैदाजन्य परिकार मधुमेहको कारण बन्न सक्छ ।
मैदाको रोटी र पास्ताजस्ता खानेकुरामा पाइने ग्लुटेन -खानेकुरामा पाइने प्रोटिनको समूहले मानिसहरुमा मानसिक समस्या पनि निम्त्याउने पत्ता लागेको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार केही मानिसहरुमा मैदाको रोटी र पास्ता खाएपछि त्यसमा रहेको ग्लुटेन नामको तत्वले मानसिक स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या ल्याउँछ ।
सेलिएक समस्या (सजिलै खानेकुरा नपच्ने) का कारण मानिसहरु साँच्चै नै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा धेरै रुचाउँदैनन् । करिब १ प्रतिशत मानिसमा यो समस्या हुन्छ । तर, यो भन्दा धेरै करिब १२ प्रतिशत मानिसहरुलाई भने ग्लुटेनले समस्या पार्छ जसले पेट फुल्ने र वान्ता हुने गर्छ । नन सेलिएक ग्लुटेन संवेदनशीलता साँच्चै हुन्छ वा मष्तिस्कमा मात्रै हुन्छ भनेर निर्धारण गर्न शोधकर्ताहरुले ब्लाइन्ड फुड टेस्ट गरे र ती मानिसहरुको लक्षणहरुको परीक्षण गरे ।
‘तर, मानिसहरुलाई ग्लुटेन नभएको खानेकुरा खाएपछि राम्रो महसुस भयो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ’ उनले भनिन् । बिसेइकिरेस्कीका अनुसार मानिसहरुले ग्लुटेन खान छोडेपछि ताजा फलफूल र सागसब्जीहरु खान र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन चाहन्छन् ।
उनको अध्ययनले पत्ता लगाएको तथ्यहरु एक अर्को पुरानो अध्ययनसँग मिल्दोजुल्दो छ जसले प्रोटिन सेन्सेटिभ भन्दा धेरै ग्लुटेन सेन्सेटिभ मानिसहरुमा निराशाको लक्षणहरु धेरै देखापर्ने पत्ता लगाएको थियो । सन् २०१५ मा इटालीमा गरिएको अध्ययनले ग्लुटेन संवेदनशील मानिसहरुमा ग्लुटेनको सेवनपछि निराशामा बढाउने र ब्रेन फगिनेस हुने तथ्य पत्ता लगाएको थियो ।
अष्ट्रेलियाको न्युक्यासल विश्वविद्यालयका शोधकर्ता माइकल पोट्टर भन्छन्, ‘यी अध्ययनहरुले साँच्चै नै यस्ता मानिसहरुलाई ग्लुटेनको कारणले मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु देखिने र उनीहरुलाई विभिन्न अध्यारो चुनौतीहरु आइपर्ने देखाउँछ ।’ डाक्टर बिसेइकिरेस्कीको टिमले पत्ता लगाएका तथ्यहरु गत साता ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिकल सोसाइटी अफ अष्ट्रेलियामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर एमिनो एसिड, क्याल्सियम र फाइबरले भरपुर सोयाबीन थुप्रैका लागि हानिकारक पनि हुनसक्छ । हाइपरटेन्शनदेखि मृगौलासम्मको रोगलाई यसले थप वृद्धि गर्नसक्छ । भारतकी डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट ज्योती शर्माका अनुसार सोयाबीनबाट हुने एलर्जी गहुँका उत्पादन (ग्लूटेनको एलर्जी) बाट हुने एलर्जीको तुलनामा धेरै हुन्छ । केही रोग भएका व्यक्तिले यसको सेवन गरे थप समस्या निम्त्याउन सक्छ । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔं
मुटु रोग: यदि तपाईंलाई कुनै प्रकारको मुटु रोग छ भने सोयाबीन नखानुहोस् । अनुसन्धानका अनुसार यसमा ट्रान्स फ्याट कम हुन्छ जुन मुटुका लागि राम्रो मानिँदैन । यसले हाइपरटेन्सन बढाउने काम पनि गर्दछ ।
गर्भवती महिला: डा. शर्माका अनुसार सोयाबीनमा एमिनो एसिड हुन्छ जसले शिशुको विकास रोक्ने काम गर्दछ । त्यसकारण गर्भवती महिलाले यसको सेवन गर्नुहुँदैन ।
मृगौलाको समस्या हुँदा: मृगौलाको काम प्रोटिनलाई फिल्टर गर्नु पनि हो र सोयाबीनमा भरपुर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । यस्तोमा जुन व्यत्तिलाई मृगौलासम्बन्धि रोग छ उनीहरुले सोयाबीन निकै कम मात्रामा खानुपर्छ ।
थाइराइडका बिरामीले: सोयाबीनमा पाइने केही एमिनो एसिडले हर्मोनलाई प्रभावित गर्दछ । सोयाबीन थाइराइडसँग जोडिएको थाइरोक्सिन हर्मोनलाई कम वा वृद्धि गर्छ । यसले थाइराइडलाई बढाउने गर्दछ । त्यसकारण थाइराइडका बिरामीले सोयाबीनबाट टाढै रहनुपर्छ ।
सोयाबीन खानुका फाइदा पनि छन्:
एसिडिटीबाट राहत: यदी तपाईं एसिडिटी को समस्याबाट ग्रसित हुनुन्छ भने सोयाबीनको आटाको रोटी खान आवश्यक हुन्छ । जसले पेटलाई सफा राख्छ एसिडिटी की समस्या हट्छ ।
मानसिक संतुलन ठीक गर्छ: जो तनाव र मानसिक रोगबाट पीष्ति हुन्छन् उनीहरुका लागि सोयाबीन फाइदाजनक हुन्छ । यसकारण मानसिक रोगीले आफ्नो खानपिलनमा सोयाबीन खान आवश्यक छ । जसले दिमाग तेज बनाउँछ । सोयाबीनमा प्रोटीनको मात्रा धेरै हुन्छ भन भिटामि B र विटामिन E को मात्र प्रचुर ह्न्छ । जसले शरीरका लागि आवस्यक एमिनो एसिड को कमी पूरी गर्छ । सोयाबीनमा दूध, अण्डा तथा मासुभन्दा धेरै प्रोटीन पाइन्छ ।
हड्डि बलिया हुन्छ: सोयाबीन मा आइसोफ्लेवोंस नामक रसायन पाइन्छ । जसले विशेष गरेर महिलाको शरीरको हड्डिलाई कमजोर हुनबाट जोगाउँछ ।
यस्ता छन्, सोयाबीन चाट बनाउने तरिका:
सामग्री: सोयाबीन (उमालिएको) २५० ग्राम, कालो चना (उमालिएको) १०० ग्राम, प्याज ७५ ग्राम, गोलभेंडा ९० ग्राम, उमालेको आलु १०० ग्राम, कालो नून एक चम्चा, मरिचको धूलो आधी चम्चा, कागतीको रस डेढ चम्चा
विधि: एउटा भाँडोमा सोयाबीन, कालो चना, प्याज, गोलभेंडा, आलु, कालो नून, मरिच र कागतीको रस हालेर मज्जाले मिसाउनुस् ।
सोयाबीन चाट तयार भयो?
सुगन्ध अनि स्वाद:
मसलाहरूले र्याललको उत्र्सजनको मात्रा बढाउँछ, जसमा अमाइलेज वा पिटाइलिनको मात्रा बढी हुने हुँदा यिनले पेटमा खाना पचाउनमा सहजीकरण गराउन तथा खानेकुरालाई परिमार्जन गरी कार्बोहाइड्रेट लाइप्रचुर सारयुक्त बनाई बढी सजिलै पच्ने बनाउँछ । यसले मुख पाचन प्रणलीमा हल्का एत्तेजित क्रियाकलाप देखाउँछ । अतः मसलाहरूले खाने अभिरुचि बढाउने प्रेरणा दिनुका साथै र्यालजन्य तथा पेटको रसको प्रवाहलाई तीव्र पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
सौन्दर्य तथा शरीर रक्षामा मसलाको भूमिका:
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको विषयमा कचिङ्गल भइरहेको छ ।